July 12, 2019 - BaHuThuTaGabar
အမေ့ကို တန်ဖိုးထားသလို မိန်းမကိုလည်း တန်ဖိုးထားပါ … အမေ့ကို တန်ဖိုးထားသလို မိန်းမကိုလည်း တန်ဖိုးထားကြပါ … ကျွန်တော် ကုတင်ပေါမှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက်မိတယ် ။ အသင့်အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံလှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော်သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေ အတွေးတစ်ချို့ဝင်လာပြီး ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ […]
မနေ့ညက ကျောက်ကျသွားတာ ဝမ်းသာလို့ ရောဂါတူ သူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ်သောက်နေတဲ့ ဆေးလေးတွေ ပြောပြချင်လို့ပါ
မနေ့ညက ကျောက်ကျသွားတာ ဝမ်းသာလို့ ရောဂါတူ သူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ်သောက်နေတဲ့ ဆေးလေးတွေ ပြောပြချင်လို့ပါ 1. Fame ကထုတ်တဲ့ ဆီးကျောက်ပျော်ဆေး ၁ရက် ၄လုံး 2. Cital ဆိုတဲ့ ဆေးရည်ကိုက ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း ရေတဖန်ခွက်နဲ့ဖျော် မနက် ၁ ကြိမ် […]
သူများမြေကို ခိုးမိလို့ သရဲဘဝနဲ့ ဝဋ်ကြွေးဆပ်ရတဲ့ ကျောင်းကုန်းမြို့က ဒေါ်သိန်း (ဖြစ်ရပ်မှန်) ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် ဒေါင့်ကြီး ကျေးရွာ သည် စည်ကားသောရွာကြီးတရွာ ဖြစ်ပါသည်။တိုက်နယ် ဆေးရုံ၊ အ-ထ-က ကျောင်း၊ စည်ကားစွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသော ကုန်စုံဆိုင်၊ အထည်ဆိုင်၊ တိုက်တာပေါများပြီး အိမ်ကြီး အိမ်ကောင်းများနှင့် စည်ကားစွာ ရှိပါသည်။ […]